scale ကို dial - အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး | Infinite-Electronic.hk
နေအိမ်ထုတ်ကုန်များPotentiometers, Variable resistorsscale ကို dial
scale ကို dial
H-22-6A-B Bourns, Inc. ဖေါ်ပြချက်:DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC
H-23-6A Bourns, Inc. ဖေါ်ပြချက်:DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC
H-22-6A Bourns, Inc. ဖေါ်ပြချက်:COUNTING DIAL W/CLICK BRAKE
H-516-6M Bourns, Inc. ဖေါ်ပြချက်:DIAL COUNTING 0-15 TURNS
- ကီလိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ LaVerne, CA. အတွက်ဘော့ Gach အသုံးပြုပုံ 1956 ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ခဲ့သည် ဤအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ dial အတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အဆိုပါကု...အသေးစိတ်
612 Kilo International ဖေါ်ပြချက်:DIAL SCALE 1TURN UNCALIBRTD ALUM
562 Kilo International ဖေါ်ပြချက်:DIAL SCALE 1TURN CALIBRATED ALUM
512 Kilo International ဖေါ်ပြချက်:DIAL SCALE 1TURN CALIBRATED ALUM
3412 Kilo International ဖေါ်ပြချက်:DIAL 20 TURN POS BRAKE BLK ALUM
BI Technologies ကတစ် TT အီလက်ထရွန်းနစ်ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်းများနှင့်ကာကွယ်ရေးနှင့်အာကာသ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုအီလက်ထရွန်နစ်စျေးကွက်ဖြတ်ပြ...အသေးစိတ်
2606S BI Technologies / TT Electronics ဖေါ်ပြချက်:DIAL-7/8" 15-TURN 1/4" SHAFT
2607 BI Technologies / TT Electronics ဖေါ်ပြချက်:DIAL-7/8" 20-TURN 1/4" SHAFT
2606 BI Technologies / TT Electronics ဖေါ်ပြချက်:DIAL 7/8" 20 TURN 1/4"SHAFT
2646 BI Technologies / TT Electronics ဖေါ်ပြချက်:20 TURN COUNTING DIAL
11A11B10 Electro-Films (EFI) / Vishay ဖေါ်ပြချက်:DIAL SCALE 11 TURN CONCENTRIC
18A11B10 Electro-Films (EFI) / Vishay ဖေါ်ပြချက်:DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC
28A11B10 Electro-Films (EFI) / Vishay ဖေါ်ပြချက်:DIAL SCALE 21 TURN CONCENTRIC
18A21B10 Electro-Films (EFI) / Vishay ဖေါ်ပြချက်:DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC
P0400-83 Hamlin / Littelfuse ဖေါ်ပြချက်:FACE PLATE 1-60 SEC. REV. H
P0400-12 Hamlin / Littelfuse ဖေါ်ပြချက်:FACE PLATE 0.05-1 SEC REV. B
P0400-82 Hamlin / Littelfuse ဖေါ်ပြချက်:FACE PLATE 0.1-10 SEC. REV. H
ဖေါ်ပြချက်: DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7478 pcs
ထုတ်လုပ်သူ: Kilo International
ဖေါ်ပြချက်: DIAL SCALE 1TURN UNCALIBRTD ALUM
ထုတ်လုပ်သူ: BI Technologies / TT Electronics
ဖေါ်ပြချက်: DIAL-7/8" 15-TURN 1/4" SHAFT
ဖေါ်ပြချက်: DIAL SCALE 1TURN CALIBRATED ALUM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2734 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIAL-7/8" 20-TURN 1/4" SHAFT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4075 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2671 pcs
ဖေါ်ပြချက်: COUNTING DIAL W/CLICK BRAKE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8799 pcs
ထုတ်လုပ်သူ: Precision Electronic Components Ltd.
ဖေါ်ပြချက်: DIAL DIGITAL READOUT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2491 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIAL 20 TURN POS BRAKE BLK ALUM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2449 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIAL SCALE 10 TURN CONCENTRIC
ဖေါ်ပြချက်: DIAL 7/8" 20 TURN 1/4"SHAFT
ဖေါ်ပြချက်: DIAL COUNTING 0-15 TURNS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 15237 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6970 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 20 TURN COUNTING DIAL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5529 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7838 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIAL-1-13/16" 15-TURN 1/4" SHAFT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3941 pcs
ဖေါ်ပြချက်: COUNTING DIAL 0-20 TURNS
ဖေါ်ပြချက်: DIAL SCALE 11 TURN CONCENTRIC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6472 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIAL SCALE 21 TURN CONCENTRIC
ဖေါ်ပြချက်: DIAL COUNTING 0-20 TURNS
ဖေါ်ပြချက်: DIAL 20 TURN POS BRAKE CLR ALUM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4414 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2833 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIAL 7/8" 10 TURN 6MM SHAFT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 10300 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 15 TURN COUNTING DIAL
ဖေါ်ပြချက်: DIAL DIGITAL WITH KEY
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2549 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2801 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8907 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DIAL DIGITAL 10 TURN3DIGIT
ဖေါ်ပြချက်: DIAL-7/8" 10-TURN 1/4" SHAFT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 10252 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3742 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3967 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 10587 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7648 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 16215 pcs
ဖေါ်ပြချက်: COUNTING DIAL 10 TURN 22M
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7940 pcs
ဒေါင်းလုပ်: ACD22 6.35-10.pdf
ဖေါ်ပြချက်: FACE PLATE 1-60 SEC. REV. H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 23005 pcs
ဖေါ်ပြချက်: FACE PLATE 0.05-1 SEC REV. B
ဖေါ်ပြချက်: FACE PLATE 0.1-10 SEC. REV. H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 20354 pcs